I-3BR elungele usapho kwiPond Cottage! Amakhadi oNcedo! Kufuphi noLwandle/Amachibi/Iya
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCoastal
UCoastal unezimvo eziyi-205 zezinye iindawo.
Le ndlu inkulu ibekwe kwindawo ezolileyo yaseTarpon Pond. Iimayile nje ezi-8 ukuya ePelican Beach kunye ne-1.2 yeemayile ukuya kumachibi oLwandle lwaseLwandle, i-Pelican's Nest oceanfront, indawo yokudlela yangaphandle, i-clubhouse, kunye neendawo zegalufa, ibekwe ngokugqibeleleyo. Yonwabela ukubukela iisampulu zezilwanyana zasendle ezininzi zaseSeabrook ngelixa uhleli kwiveranda ekhuselweyo engqongwe ngamahlamvu etropiki. Relax nosapho kunye nabahlobo bakho kule cottage ihonjiswe kakuhle.
Le ndlu inegumbi lokutyela elivulekileyo / lokuhlala elinesilingi zecathedral kunye nemigangatho yokhuni oluqinileyo. Kukho itafile ehlala i-6-ilungele ukuqokelela kunye nokwabelana ngamabali osuku lwakho. Iisilingi eziphezulu kunye neziko zenza umoya opholileyo. Iingcango ezityibilikayo kwiveranda ekhuselweyo kwaye zivumele ukukhanya kwelanga kuhluze emithini. Impahla etofotofo inika indawo yokuhlala kuzo zonke iindwendwe zakho. Yonwabela ukubukela imiboniso kwi HDTV/DVD. Qokelela itafile kwiveranda ekhuselweyo njengoko urhabula iziselo ezibandayo. Hlala kwenye yeerockers kunye nencwadi elungileyo. Ikhitshi le-galley ligcwele kwaye linayo yonke into oza kuyidinga xa upheka ngexesha leholide yakho.
Kukho amagumbi okulala amathathu kule cottage. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu. Kukho iTV kunye nebhafu yeen suite eneshawari. Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini ezingamawele. Ibhafu yeholo eneshawa/ibhafu ingaphandle nje komnyango. Phezulu kukho igumbi eliphezulu elineebhedi ezimbini zokumkanikazi. Ibhafu ye-en suite ineshawari. Abantwana baya kukuthanda ukwabelana ngeli gumbi!
528 Tarpon Pond ibekwe .8 miles ukusuka Pelican Beach kunye 1.2 miles ukusuka Beach Club amachibi, Island House zokutyela / imivalo, kunye negalufa. Amakhadi e-Amenity akunika ukufikelela kwizibonelelo zeSeabrook Island Club, afakiwe kwirenti. La makhadi akunika ukufikelela kumachibi aphambi kolwandle (okwamaxesha), indawo yokutyela yangaphandle ye-Pelican's Nest (yexesha lonyaka), indawo yokutyela ye-Island House, igalufa kunye nentenetya. Imirhumo eyongezelelweyo ihlawuliswa kuyo yonke imisebenzi ngaphandle kokusetyenziswa kwamachibi angaphandle.
Le yindlu entle yeholide yakho kunye nosapho kunye nabahlobo!
Ukuba urhoxisa ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ngaphambi komhla ocwangcisiweyo wokufika, ufumana imali yakho emva, thabatha i-$250. Ukuba uyarhoxisa kwiintsuku ezingama-30 zomhla wokufika kwakho, uphulukana nemali yakho. Ukuba ukwazi ukuphinda uyibhukishe, uyakufumana into esiyiqeshileyo ngayo, thabatha i-$250. Zive ukhululekile ukubuza nayiphi na eminye imibuzo onokuba unayo.
Ngeerenti zenyanga zasebusika umgaqo-nkqubo umi ngolu hlobo lulandelayo: Ukurhoxiswa okwenziwe ukuya kwiintsuku ezingama-60 ngaphambi komhla ocwangcisiweyo wokufika, idiphozithi iya kubuyiselwa imali engaphantsi kwe-$ 250.00 yokurhoxisa imali. Ukurhoxiswa okwenziwe ngaphantsi kweentsuku ezingama-60 ngaphambi komhla ocwangcisiweyo wokufika, zonke iimali zilahlekile. Ukuba iyakwazi ukurenta imihla ekuvunyelwene ngayo emva kokurhoxiswa, undwendwe luza kubuyiselwa imali elingana nexabiso elitsha lerenti kuthatyathwe iR250 yoMrhumo wokuCima. Isixa-mali esibuyiswayo asiyi kudlula imali ehlawulwe luNdwendwe phantsi kwemiqathango yeSivumelwano sokuRenta.
Ilayisensi yeShishini le-SI 20210529
Ikhosi yeGalufa kunye ne-Mid-Island
Umbuki zindwendwe ngu- Coastal
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Seabrook Island